Ukhuphelo oluxabisekileyo lwabasebenzisi be-GIS-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukulandwa okuxabisekileyo kwabasebenzisi be-GIS
Nalu uluhlu lwezinto ezikhutshelweyo ezihlala ziluncedo kakhulu kubasebenzisi beqonga leCAD / GIS. Ezinye zazo azifumaneki kwiinguqulelo zamva nje, kodwa zisisisalathiso kwaye kufanelekile ukugcina iso kuhlaziyo lwazo.
I-Autodesk DWF Viewer
Isixhobo sokukhulula ukufunda nokushicilela iifayile ze-AutoCAD kwifomethi ye-dwf ye-2 kunye ne-3 ubukhulu.
Izixhobo zokuphucula umkhiqizo wabathuthukisi be-ESRI nabasebenzisi, kumgca weArcView, ArcEditor kunye neArcInfo.
Izixhobo eziphuhliswe ngabarr specialists
I-DXF2XYZ iguqula ifayile ye-dxf kwingcaciso ye-comma edibeneyo kunye nezicwangciso ze-xyz.
Umbuso osebenzayo oguqulela i-ArcInfo okanye i-ArcCAD indawo yokusebenzela kwiinguqulelo ze-7x, okanye ngokutsha.
Abaguquleli beefayile zeAtlas Geo
Idibanisa iqonga le-Atlas GIS kumgca we-ESRI
I-TNTatlas V6.20Windows Installer Update
Ukuhlela, ukusabalalisa nokubonisa ulwazi lwendawo kwindawo ye-Atlas.
Iifayile zoLwazi lweeNguqulelo
Uguqula idatha esuka kumgca we-TNT ukuba uboniswe kwindawo
ICelestNav sisibali sokubala esiquka i-nautical almanac ... esoloko iluhlaza. Isebenza kwi-palmOS.
M / IX 3.0 kwi-Windows
Uguqula i-PC njengesiphelo se-server, ukuze ingasetyenziselwa ukubonelela ngeenkonzo kwiikhomputha zabaxhasi ngaphakathi kwe-intranet ... okanye ngaphandle?
Iingxelo ezixabisekileyo kwiSMS.
I-SWAT / i-GRASS I-Modro ye-Hydrological Modeling, I-GRASS Reference Reference On-line
Umqulu, isofthiwe kunye nezibonelelo ze-Grass line
Isixhobo sokukhulula ukuhambisa kunye nokwenza imisebenzi eyisiseko kunye nemveliso ye-ESRI
Ukongezwa kwezithili ze-ArcView GIS
Izixhobo kunye nezandiso zendalo, ukuhlaziywa kweedilesi kunye nokucwangciswa ukuba ukuba unokuxhamla inokukunceda ukucwangcisa iinkqubo.
Guqula i-HPGL kunye ne-HP-GL / 2 .plt ipenethi kunye neifayile kwiifayile ze-DXF
Gcina ngokuzenzakalelayo AVX
Ulwandiso lwabasebenzisi beArcView olondoloza ngokuzenzekelayo, rhoqo rhoqo ... luhle kakhulu ukuba sinomxholo weArcView ophazamiseka rhoqo. 🙂
Ivumela ukubonisa idatha kwii-sensors ezikude ezinje ngeLandsat, Spot, Radarsat, ERS-1, Noaa Avhrr okanye iimveliso zokugqibela ezinjengemifanekiso yesathelayithi okanye ii-orthophotos. Ikwavumela ukubonisa iifayile ze-GIS zeefomathi eziqhelekileyo, eyona nto ilungileyo kukuba inokugxeka iifayile ze-leyenco ezingaphezu kweefomathi ezingama-80 zeraster / vector kubhabho
I-NAPIS idibanisa iteknoloji yenkcazelo yendawo ye-geographic (GIS) usebenzisa i-ESRI Map Map, evumela ukuba i-database yenkalo yesicatshulwa ihambelane neempawu zendawo kwiimephu zeekhompyutha.
Izixhobo zokunyusa imveliso kwezinye izinto eziqhelekileyo ze-AutoCAD kwiindawo zemephu, uphando, uluntu kunye ne-GIS. Nangona ibuyela umva iyahambelana, kufanelekile ukugcina iso kuhlaziyo lwayo.
I-ER Mapper uhlalutyo lomgcini we-Unix v1.0
I-Wizard yokuhlalutya idatha ye-ER Mapper, iyafumaneka kwakhona PC
Ngaba uphakamisa abanye?
Izikripthi zokubala okuntsonkothileyo
Ukusuka kwii-3D Iidolophu kunye neendlela ze-GIS 2011